Dhalinyaro Soomaaliyeed oo cabasho ka muujiyay Xabdi ay ku jiraan Bilaa maxkamad 3sano – SBC
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo cabasho ka muujiyay Xabdi ay ku jiraan Bilaa maxkamad 3sano
Posted by Webmaster on October 30, 2012 Comments
Dhalinyaro Soomaaliyed oo ku xiran xabsiyada dalkaasi Kenya ayaa Baaq codsi ah u jeediyay Maamulada Dalka ka jira iyo Dowlada Dhexe Ee Soomaaliya.
Dhalinyaradan Soomaliyeed oo sheegay in ay ka tageen deegaanada xeebaha ah ee Puntland islamarkaana si kadis ah ay ula kulmeen maraakiibta ciidamada shisheeye ee ilaalada u jooga Soomaaliya loona qabtay shaki burcad badeednimo .
waxay dhalintan intaasi ku dareen in mudo 3 sanadood ah ay ku xidhan yihiin gudaha xabsi ku yaala dalkaasi Kenya, iyagoona muujiyay dareenkooda xabsiga ay ku jiraan oo ah mid aad u liita sida ay hadalka u dhigeen.
Maxamuud Siciid Xirsi oo ka mid ah dhalinyaradaasi ku xiran xabsiyada Kenya waxa uu la soo xiriiray SBC International isagoona u sheegay in mudo 3 sano ah ay xabis yihiin islamarkaana aanay helin ilaa iyo iminka maxkamad cadaali ah oo xukun ku riday.
Waxa uu sheegay Maxamuud in ay ka mid ahaayeen raga Kaluumeysiga u taga badda islamarkaana ay kuguda jireen xiligii la soo qabanayay howlahooda kaluumeysi.
“Walaal gacaliye Meeshan waan ku dhibannahay, dowladayadii Soomaaliya iyo Puntlandba waxan ugu baaqeynaa in ay naga soo gaaraan, oo arinteena ka hadlaan” ayaa ka mid ahaa hadalada Maxamuud Siciid .
Waxa uu maxamuud sidoo sheegay in ilaa iyo iminka aysan ogeyn sababaha ay u xidhan yihiin, maadaama aysan wadanin wax hub ah oo ay wateen markii la qabqabanayay, ciidamadii soo qabtayna ay cadeeyeen in arintoodu ay tahay shaki loogaga shakiyay burcad badeednimo qura.
Waxa uu ninkani ugu baaqay qolyaha burcadbadeeda Soomaalida in ay ka waantoobaan waxyaabaha ay ku guda jiraan, isagoo soo qaatay in howlahaasi ay khatar gelisay kaluumeysatadii deegaanka u dhashay ee badda ka kuuleysan lahaa.